माताको ठगी धन्दा ! तिम्रै आमा बो’क्सी हो भन्दै विदेशमा कमाएको ३ लाख पैसा, महंगो मोवाइल लिएर फरार (भिडियो हेर्नुस्) – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Video/माताको ठगी धन्दा ! तिम्रै आमा बो’क्सी हो भन्दै विदेशमा कमाएको ३ लाख पैसा, महंगो मोवाइल लिएर फरार (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । आफुलाई भगवानको विशेष शक्ति छ भन्दै दावा गर्ने एक महिलाको विश्वासमा पर्दा दागंमा एक परिवारको सम्पत्ती सकिएको छ । दागंको घोराहीमा एक युवकको परिवारमा एक जना वृद्ध महिलालाई फ सा एर उनको सम्पत्ती सकिदिएकी हुन् । वृद्ध महिलाका छोरा विदेशमा थिए । छोरा विदेशवाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेका थिए ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
आमाले मलाई सिधै लिएर माताकोमा लैजानु भयो । त्यहाँ गएपछि माताले मलाई त्यस्तो अवस्था बनाइन् । माताले ३ लाख ५ हजार रुपैया ठगी गरेको भरतले दावी गरेका छन् । साउदीवाट कमाएर ल्याएको पैसा पनि सबै ति माताले लिएर गइन् । भाले, मोवाइल र बोका पनि झ्वाम पारिन् । ति माताकोमा लिएर गएपछि स्वास्थ्यमा समस्या आएका भरत अहिले ति मातालाई प्रहरीकोमा लिएर गएपछि भने आफु पुन स्वास्थ्य भएको बताए । अहिले म नर्मल छु, त्यो माताले के गरिन् अनि म अस्वभाविक कृयाकलाप गर्न थाले ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **